Sciatica - Sababta, ogaanshaha, talooyinka iyo daaweynta.
Sciatica waa ereyga loo adeegsado markii aan uusoo gudbinay xanuunka lugta, kaasoo badanaa ku faafay kursiga (gobolka gluteal) ama dhabarka, dhanka miskaha, dhinaca dambe ee bowdada banaanka, dhinaca gudaha ama dibedda kubka iyo xaaladaha qaarkood ilaa lugta.
Astaamaha dhaca, labadaba dareenka (isbedelka dareenka iyo / ama kabuubyada) iyo muruqa (daciifnimada muruqyada), waxay kuxiran yihiin xididka dareemayaasha ama xididdada dareemayaasha ay saameeyaan / yaqyaqsoodo. Sababta dhabta ah ee loo yaqaan 'sciatica' run ahaantii waa xanaaqa dareemayaasha oo ay ugu wacan tahay waxyeelo soo gaarta diska 'intervertebral discs', prolapse ama stenosis. Hoos waxaad sidoo kale ka heli doontaa layliyada lagu taliyay.
Cudurka 'sciatica' ee been abuurka ah, dhinaca kale, waxaa badanaa keena cillad la'aanta muruqyada iyo kala-goysyada - sida cudurka 'piriformis syndrome', qufulada wadajirka ah iyo / ama kursiga myalgias. Dadka leh shaqooyin culus oo culus oo da 'hore ah, iyo kuwa aad u yar, ayaa halis ugu jira inay ku dhacaan isbeddelada noocaas ah / dhaawacyada.
Waa muhiim inaad si taxaddar leh u qaadatid calaamadaha / cabashooyinka sciatica isla markaana uu baaro takhtar caafimaad. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto Boggayaga Facebook haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid.
- Kala bax prolapse ee dhabarka hoose waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay astaamaha sciatica / xanuunada. Tani waa tusaale ka mid ah waxa aan ugu yeerno sciatica dhabta ah. La xiriir dhakhtar haddii aad leedahay astaamaha noocan oo kale ah - habkaas waxaad ku heli kartaa talo fiican, u diritaanka sawirka (haddii loo baahdo), jimicsiyo gaar ah iyo daaweyn habeysan.
Sciatica waa eray qeexaya astaamo ka badan baaris gaar ah ama cudur. Waxay macnaheedu tahay xanuun darbi jiifka neerfaha ah - sidaas dariiqaas oo kale waa erey guud, laakiin haddii aad bilowdo inaad ka hadasho meelaha qaarkood iyo xididdada dareemayaasha ee ay saameeyeen, markaa waxaad helaysaa baaritaan gaar ah oo gaar ah.
Tusaale ahaan haddii cuncunka neerfaha ay sabab u tahay xirmidda miskaha oo ay weheliso piriformis syndrome dhinaca midig. markaa waxaad leedahay baaritaanka 'iskudhafka wadajirka ah / xaddidaadda la xiriirta' piriformis syndrome '(tusaale sciatica beenta ah) - iyo haddii calaamadaha cudurka' sciatica 'ay sabab u tahay faafinta fiiqitaanka markaa baaritaanka wuxuu noqon karaa' cillad jahwareer / qallafsan ee 'L5 / S1' oo leh kalgacal xidid leh oo ka soo horjeeda xididdada saxda ah ee S1 (tusaale sciatica dhab ah).
Sidii aan soo sheegnay, astaamaha sciatica waxaa sababa xanaaqa ama xanaaqa dareemaha sciatica - calaamaduhuna way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba meesha qanjaruuxu jiro iyo waxa sababa. Waa kuwan qaar ka mid ah sababaha ugu caansan ee sababi kara calaamadaha xanuunka / xanuunka:
Beenta sciatica / sciatica
Waxaa muhiim ah in la xusuusto inaan sidoo kale haysanno - taas oo ka soo horjeedda herniation disc / disc disorder - waxa loo yaqaan 'sciatica been', oo sidoo kale loo yaqaan 'sciatica'. Tani waa marka myalgias, muruqyada cidhiidhiga ah, inta badan muruqyada gluteal iyo piriformis, oo ay weheliso xannibaadaha wadajirka ah ee miskaha / dhabarka hoose - waxay cadaadis saareysaa neerfaha nafsadda, sidaasna waxay ku siinayaan astaamo la xiriira sciatica dhabta ah.
Cudurka 'sciatica' ee beenta ah waxaa lagu daaweyn karaa iyada oo loo marayo daaweynta dhibcaha, fidinta, abaabul wadaagga iyo shaqada unugyada jilicsan - iyo sidoo kale jimicsiyo gaar ah, sida faafin. Waa muhiim inaad la tashato khabiir ku takhasusay muruqyada (sida lafopractor ama daaweeye buug gacmeed - labaduba waxay xaq u leeyihiin inay tixraacaan sawirka haddii loo baahdo) si looga caawiyo baaritaanka sciatica been iyo run ah.
MUUQAAL (fiidiyahaan waxaad ku arki kartaa dhammaan layliyada oo leh sharraxaad)
Fiidiyowgu ma bilaabmin markii aad riixdid? Isku day cusboonaysiinta biraawsarkaaga ama si toos ah uga daaya kanaalkayaga YouTube. Xor baad u tahay inaad iska diiwaangeliso kanaalka bilaashka ah si aad ugu biirto qoyskeena!
Lumbar spinal stenosis sabab u ah sciatica
Lumbar wuxuu muujiyaa inuu jiro hadal ku saabsan laf-dhabarka lumbar, iyo laf-dhabarka laf-dhabarka wuxuu macnaheedu yahay inay jiraan xaalado dareeme oo adag oo ku jira laf-dhabarka gudaha lafta lafteeda. Tani waxay u horseedi kartaa xanaaqa neerfaha ama qanjaruufta neerfaha sababo la xiriira xaqiiqda ah in lafdhabarta lafteeda (qaybta nidaamka dhexe ee neerfaha ee jiifa gudaha lafdhabarta lafteeda) ay dhex marto kanaalkan lafdhabarta. Cudurka 'Stenosis stenosis' wuxuu badanaa ku dhacaa dadka waayeelka ah sababtoo ah xirashada iyo jeexitaanka / osteoarthritis iyo kaydinta lafaha la xiriira da'da ama kala-goysyada qoorta. Neefsashada lafdhabarta ayaa ku badan dadka da'da ah waxayna la xiriirtaa xirashada iyo jeexitaanka. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurkaan iyada - iyo sidoo kale inbadan ka akhriso qaababka daaweynta iyo tallaabooyinka yareynta astaamaha wanaagsan.
Sidoo kale aqri: - Cadaadiska lafdhabarta ee dhabarka hoose
Lumbar prolapse waa sababaha sciatica
Tani waxay sharraxaysaa cilladda diska taas oo cufnaanta jilicsan ee mid ka mid ah maqaarka is-dhexgalka ee laf-dhabarka (lumbar) ay ku riixday darbiga dibedda ee badan. Lumbar prolapse wuxuu noqon karaa astaamo ama astaamo xanuun - iyadoo kuxiran haddii uu jiro cadaadis xididdada dareemayaasha / xididdada u dhow. Sheeko xariir, xaalada badanaa si qalad ah ayaa loogu yeeraa siibidda maqaarka - tani waa khalad maaddaama saxannada ay ku dhegan yihiin inta u dhexeysa vertebrae mana 'yeeli karaan'. Sawirka hoose waxaad ku aragtaa sawir ah sida xididka xididku u xoqin karo herniation disc. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan cudurkaan iyada.
Sidoo kale aqri: - Udhalashada dhabarka hoose
Uurka la xiriira sciatica
Culeyska iyo booska uurjiifka awgood, waxaa jiri kara cadaadis ku dhaca dareemaha nafsadda, gaar ahaan boosaska soo ifbaxaya - sida fadhiga. Tani caadi ahaan khatar kuma aha hooyada iyo ilmaha midkoodna, laakiin waxay u horseedi kartaa kabuubyo iyo dareemo cagaha oo si aan toos ahayn u horseedi kara lumitaanka dheelitirka iyo hoos u dhaca dhaca. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xasuusto in haweenka uurka leh xaalado badan ay la kulmaan dhibaatooyin miskaha iyo isbeddelada booska miskaha - taas oo u horseedi karta xayiraad wada jir ah oo ku saabsan miskaha iyo dhabarka hoose, iyo sidoo kale myalgias la xiriira barida iyo dhabarka hoose.
'Spondylo' waxay muujineysaa in kani yahay vertebra - iyo 'listese' macnaheedu waa inay jirto 'siibasho' vertebrakan oo laxiriira lafdhabarta hoose. Anterolysis micnaheedu waa in vertexku hore u rogmaday horena loo eego oo dib loo habeeyo ayaa ka dhigan in vertexku gadaal u riixmayo.
Si aan u helno sawir wanaagsan waxa ay tani ka dhigan tahay, waxaan dooranay inaan ku tusno sawirka raajada. Raadiyaha halkaan, taas oo muujineysa lumbosacral columnalis (laf-dhabarka iyo miskaha - oo laga arko dhinaca) dhinaca dambe, ka dib waxaan aragnaa sida L5 (laf-dhabarta hoose ee laf-dhabarka) ay horay ugu siibatay ee la xiriirta laf-dhabarka hoose, ie S1. Tani waa waxa aan ugu yeerno 'spondylolisthesis'. Jimicsiga iyo jimicsiga ayaa leh khatar aad u sareysa oo ah inuu ku dhaco xaaladan marka loo eego dadweynaha guud.
A spondylolisthesis muhiim ah oo ka mid ah L5 wixii ka weyn S1 la arkay sawirka raajada.
Astaamaha cudurka 'sciatica'
Calaamadaha caadiga ahi waa iftiin ama xanuun lugaha / xanuun. Badanaa waxaa loo yaqaannaa jalaatada. Astaamaha waxay ku kala duwanaan doonaan iyadoo ay kuxiran tahay in xidid dareeme ay saameyn ku yeelanayso - sida aan horeyba u soo sheegnay, prolapse wuxuu noqon karaa mid asymptomatic ah haddii aysan jirin cadaadis laga qabo xididdada dareemeyaasha ee u dhow. Haddii run ahaantii jiro caabuq xidid (qanjaruufo hal ama in kabadan oo xididdada dareemayaasha ah), astaamuhu way kala duwanaan doonaan iyadoo kuxiran xididka dareemayaashu ay waxyeelleeyaan. Tani waxay sababi kartaa labada dareen (kabuubyo, xanuun, shucaac iyo dareemo daciif ah) iyo sidoo kale astaamaha dhaqdhaqaaqa (awooda muruqyada oo yaraada iyo dhaqdhaqaaqa jirka).
Cudurka xididka xididka S1 (waxay ku dhici kartaa soo dhicitaan gudaha L5 / S1)
Dareenka dareenka: daciifnimo ama kordhay dareenka ayaa ku dhici kara dermatoma la xidhiidha oo gabi ahaanba hoos ugu dhacay suulka weyn.
Xirfadaha dhaqdhaqaaqa: Muruqyada leh dareemayaasha dareemayaasha ee S1 sidoo kale waxay lahaan karaan tabar daciif ah inta lagu jiro baaritaanka murqaha. Liiska muruqyada la saameyn karo waa dheer yahay, laakiin inta badan saameynta ayaa inta badan la arkaa marka la tijaabinayo xoogga muruqyada oo ah in suulka weyn ee gadaal loo laabo (extensor hallucis longus) tusaale ahaan. adoo tijaabinaya iska caabbinta ama tijaabinta wiishashka suulasha iyo suulasha. Muruqyadaas sidoo kale waxay leeyihiin sahay ka timaada dareemayaasha L5, laakiin waxay ka helaan calaamadaha badankood S1.
Calanka cas / calaamadaha daran
Haddii aad la kulantay inay adag tahay inaad bilowdo diyaarad markaad musqusha ku jirto (kaadida haynta) ama aad la kulantay in qalabka futada la siiyayaa uusan u shaqeynaynin si sax ah (in saxaradu ay 'toos u socoto'), markaa kuwani waxay noqon karaan calaamado aad u daran GP ama qolka gargaarka degdega ah isla markiiba si baaritaan dheeri ah loo sameeyo, maxaa yeelay tani waxay calaamad u noqon kartaa Cauda Equina Syndrome. Si guud, waxaan kugula talineynaa inaad had iyo jeer la tashato takhtar daryeel caafimaad oo shati shati ah leh (dhaqtar, chiropractor, ama daweeyaha gacanta) si loo qiimeeyo haddii aad leedahay astaamaha / cabashooyinka sciatica.
Soocida disha waxay noqon kartaa asymptomatic
Uma baahnid sciatica maxaa yeelay waxaad leedahay prolapse disc. Dad badan ayaa wali aaminsan in qof kasta oo soo bogsoodo ay qasab tahay in qalliin lagu sameeyo, laakiin sidaas maahan. Cilmi baaris ayaa muujisay in qaar badan oo ka mid ah dadka qaangaarka ah ay leeyihiin dib-u-dhac ama faafinta herniinka dhabarka, iyada oo aan taasi u horseedin calaamado.
Xaqiiqdii, dadka intiisa badan ee leh soo-kabasho ma leh xanuunka dhabarka. Hadday soo noqoshada xanuun keento iyo in kale, dabiibuhu waa inuu tixgeliyaa xaalad kasta oo shaqsi ah. Soo noqoshada la xaqiijiyay sidaas darteed looma eka cilad dhab ah oo daran ama sciatica. Amni ma leh in daaweyn loo aado herniation disc.
Baadhista cudurka sciatica
Baadhitaan caafimaad iyo ururinta taariikhdu waxay udub dhexaad u noqon doontaa samaynta ogaanshaha iyo helitaanka sababta aad u leedahay calaamadaha cudurka / sciatica. Baadhitaan qotodheer oo muruqyada, waxqabadka neerfayaasha iyo farsamada ayaa muhiim ah. Waxay kaloo suuragal noqon kartaa in laga saaro cudurro kale oo kaladuwan.
Calaamadaha neerfaha ee sciatica
Baadhitaanka ogaanshaha sawirka xanuunka loo yaqaan 'sciatica' (raajo, MRI, CT ama ultrasound)
Raajooyinku waxay muujin karaan xaaladda lafdhabarta iyo qaababka kale ee jirka ee khuseeya - nasiib darro kama muuqan karto nudaha jilicsan ee khuseeya iyo wixii la mid ah, laakiin waxay, iyo waxyaabo kale ka caawin kartaa in la arko haddii ay ku saabsan tahay lumbar spinal stenosis. Mid Baaritaanka MRI waa waxa inta badan loo adeegsado in lagu garto markii ay jiraan astaamaha cudurka 'sciatica' oo muddo dheer taagnaa / aan xanuunsanayn oo aan ka jawaabin daaweynta muxaafidka. Waxay muujin kartaa sida saxda ah waxa sababa isku-buuqa dareemayaasha. Bukaannadaas aan qaadi karin MRI sababaha ka hortagga uurka awgeed, CT waxaa loo isticmaali karaa isbarbar dhig si loo qiimeeyo xaaladaha. Dareeraha isweydaarsiga ayaa markaa lagu durayaa inta u dhexeysa dhabarka hoose ee dhabarka.
Raajo 'sciatica' (isku-xoqitaanka laf-dhabarka sababtoo ah xisaabinta)
Sawirka MRI ee sciatica sababtoo ah hoos u dhaca dhabarka hoose ee u dhexeeya L3 / L4
Imtixaankan MRI wuxuu muujinayaa qanjaruufaha laf-dhabarka inta u dhexeysa lumbar vertebra L3 iyo L4 sababo la xiriira soo-kabasho.
Sawirka CT ee sciatica sababtoo ah stenosis lumbar
Halkan waxaan ku aragnaa isbarbar dhig muuqaal CT ah oo muujinaya lumbar spinal stenosis. CT waxaa la adeegsadaa marka qofku uusan qaadan karin MRI sawir, tusaale ahaan. ay ugu wacan tahay birta jirka ku jirta ama qalabka qalabka lagu dhex isticmaalo.
Astaamaha sciatica / jirrooyinka waxaa muhiim ah in la helo sababta si qofku mid u wanaajiyo daaweynta iyo habka daaweynta. Tani waxay ku lug yeelan kartaa daaweynta jireed ee muruqyada ciriiriga u dhow iyo daaweynta wadajirka ah ee kala goysyada adag si loo hubiyo shaqada ugu fiican ee suurogal ah. Daaweynta kicinta (badanaa loo yaqaan kursiga kadeedka) waxay sidoo kale noqon kartaa aalad waxtar leh oo meesha looga saaro cadaadiska cadaadiska meel ka hooseysa vertebrae, discs iyo xididdada dareemeyaasha.
Hababka kale ee daaweynta waa cirbado qallalan, daaweynta laser-anti-bararka iyo / ama daaweynta muruqyada cadaadiska muruqyada. Daaweyntu dabcan waxay la socotaa tababar tartiib tartiib ah. Waa kuwan liiska daaweynta loo isticmaalo sciatica. Daaweynta waxaa fulin kara, iyo kuwo kale, daaweeyeyaal caafimaad oo loo oggol yahay, sida jimicsiga jirka, lafopractors iyo daaweynta bukaanka. Sidaan soo sheegnay, waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in daaweynta lagu daro tababar / jimicsi.
Daaweynta jirka: Duugista, shaqada muruqyada, abaabulka wadajirka ah iyo farsamooyinka jirka ee la midka ah waxay bixin karaan calaamadaha xanuunka iyo kororka wareegga dhiigga ee aagagga ay dhibaatadu saameysey.
daaweynta dabiiciga ah: Guud ahaan waxaa lagula talinayaa in bukaanada qaba xanuunka loo yaqaan 'sciatica' lagu amro inay si sax ah u jimicsadaan iyada oo loo marayo jimicsiga jirka ama takhtarka kale (tusaale, lafopractor casri ah ama daaweeye gacanta ah). Dhakhtarka jimicsiga jirka ayaa sidoo kale kaa caawin kara gargaarka astaamaha.
Qalliinka / qalliinka: Haddii xaaladdu aad uga sii darto ama aadan la kulmaynin horumar xagga daaweynta muxaafidka ah, qalliin ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo yareeyo aagga. Qalliinku marwalba waa khatar waana meesha ugu dambaysa ee lagu tago.
Dhaqdhaqaaqa Wadajirka ah / Iskuxirka Chiropractic Daraasadaha (oo ay ku jiraan daraasad weyn oo dib-u-eegis nidaamsan) ayaa muujisay in isku-duwidda laf-dhabarka ee isku-dhafan ay waxtar u leedahay xanuunka daran ee sciatica (Ropper et al, 2015 - Leininger et al, 2011).
Kursiga loo yaqaan 'traction bench / cox therapy: Kala-goynta iyo kursiga kala-goynta (oo sidoo kale loo yaqaanno bench bench ama cox bench) waa aaladaha kala-soocidda laf-dhabarka oo loo isticmaalo saameyn yar. Bukaanku wuxuu jiifaa kursiga keydka si meesha loo soo saaro / loo kala jajabiyo ay ugu dambeynto qeybta keydka ee kala qaybisa sidaasna uu ku furo laf-dhabarka iyo laf-dhabarka la xiriira - taas oo aan ognahay inay bixiso astaamo. Daaweynta badanaa waxaa sameeya lafopractor, daaweeyaha gacanta ama jimicsiga jirka.
Qayb aad u yar oo ah bukaannada qaba sciatica ayaa qalliinka iyo / ama ka faa'iideysta qalliinka. Waa in lagugu tixgeliyaa qalliin haddii aad leedahay xanuun aan loo adkaysan karin, oo aan lagaa nafisi karin, ama aad qabto curyaannimo daran oo cagaha iyo lugaha ah oo ka sii daraya sababtoo ah isku-buufinta neerfaha. Daaweeyaha ayaa tixraacaya qalliinka markii lagu dabaqi karo. Haddii ay dhacdo cillad xagga kaadida ah oo sabab u ah curyaannimada kaadi heysta ama dhibaatooyinka futada futada, had iyo jeer tixraac qiimeynta qalliinka isla markiiba. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada, qaar badan ayaa ka soo kabanaya inta ay sugayaan qalliinka.
"Da'da caafimaad ee ugu dambeysay", 30-kii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray adkeyn ku saabsan shuruudaha astaamaha u horseedaya qalliinka, taasoo ay ugu wacan tahay halista calaamadaha dhabarka oo sii kordha iyo soo noqnoqoshada daran ee waqtiga qalliinka dhabarka - iyo in la arkay in daaweynta loo baahan yahay (daaweynta jireed, abaabul wadajir ah, jimicsi isku dhafan oo jimicsi ah / tababar gaar ah) waxay leedahay natiijooyin aad u wanaagsan, iyo sidoo kale ku dhowaad wax saameyn ah oo xun. Taasi waa sababta, sida dhakhtar casri ah oo leh dareen caddayn iyo cilmi baaris, aad u doorato 'tababarka hore ee buruqda'.
Tallaabooyin lagu yareynayo dhacdada cudurka 'sciatica'
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah talo bixinno iyo talooyin ku saabsan astaamaha / xanuunnada sciatica, in kastoo Waxaan kugula talineynaa qof kasta oo la kulma astaamaha noocan ah inuu la xiriiro takhtar caafimaad si loo baaro / daaweynta ugu dambeysa. Sidan ayaad u hubtaa waxa ay astaamuhu yihiin oo sidoo kale waxaa lagu bari doonaa jimicsiyada ugu fiican ee adiga loogu talagalay.
- Dhaqdhaqaaq suulasha iyo anqawga si aad u kiciso dariiqyada neerfaha ee muruqyada.
- U isticmaal xanuun baabi'iyaha haddii loo baahdo, xanuunka daran, ibux iyo paracetamol oo la isku daray waxay ku siin karaan saameyn guud - 1 + 1 = 3! Ibu Maadaama ibux uu leeyahay waxyaabo badan oo anti-barar ah, halka paracetamol ay ku jiraan maaddooyin kale oo firfircoon si loo yareeyo aragtida xanuunka. Had iyo jeer la tasho dhakhtar ama farmashiistaha kahor intaadan qaadan daawada.
- Raadi dhaqdhaqaaqyo iyo boosas yareya xanuunka lugta, iska ilaali dhaqdhaqaaqyada iyo booska sii kordhinaya kuwan.
Isticmaalka usha muddada gaaban haddii gebi ahaanba loo baahdo
- Daaweyn Qabow: Baakad baraf ah dhig dhabarka hoose illaa 10-15 daqiiqo. Ku celi 3-4 jeer / maalintii. raac maamuuska midda. Biyo qaboojiyeyaasha sidoo kale waa la isticmaali karaa.
- U jiifso dhabarkaaga iyadoo jilbahaaga laaban yihiin iyo miskahaaga oo lugahaagu ku fadhiyaan kursi (waxa loogu yeero xaaladda deg-degga ah).
- Dhaqdhaqaaq yar ayaa wanaagsan xitaa haddii aad xanuun badan qabto, sida ku wareegga guriga. Qaado lugo badan oo gaagaaban halkii aad ka mari lahayd mid dheer.
- Duugista ama lagu duugi doono bowdyaha, kuraasta iyo weylaha, tani way kaa nafisi kartaa.
- Fadhiiso sida ugu yar ee suurtogalka ah. Cadaadiska saxanka ayaa ugu weyn markaad fariisato.
Sidoo kale aqri: - 8 Talo Wanaagsan iyo Tallaabooyin ka dhan ah Sciatica
Sidee looga hortagaa sciatica?
Sciatica waxaa sida ugu fiican looga hortagaa nolol maalmeedka iyada oo loo marayo waxqabadka iyo dhaqdhaqaaqa oo xajinaya muruqyada dhabarka isla markaana siiya wareegga dhiigga iyo saliidaha kala-goysyada iyo aaladda discs. Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid dhabarkaaga, waxaa laga yaabaa inay si xun u xumaadaan qaab sciatica. Sidaa darteed, dhabarkaaga u fiiri si dhab ah hana sugin inaad caawimaad ka doonato daaweeyaha. U adeegso caqliga caadiga ah gaar ahaan xamuulka culus iyo kuwa culus, adiga oo aan kor u qaadin awoodda.
Jimicsiyada looga soo horjeedo Sciatica
Halkaan waxaad ka heli doontaa dulmar guud iyo liis jimicsi oo aan soo daabacnay oo la xiriira ka hortagga, ka hortagga iyo kahortagga sciatica, xanuunka sciatica, sciatica iyo cudurro kale oo la xiriira.
Dulmar guud - Tababbarka iyo jimicsiyada ka dhanka ah sciatica:
6 jimicsi xoog oo ah miskaha adag
Ma taqaanaa qof ku xanuunsanaya sciatica iyo xanuunka dareemeyaasha? La wadaag qodobka iyaga.
Sidoo kale aqri: - 5-ta Jimicsi ee uguxun Haddii Aad Burburto
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan mowduucan:
Mudo intee le'eg ayay sciatica beenta ahi qaadataa ka hor intaanay fiicnaan?
Waqtiga ay qaadanayaan ka hor intaadan ka takhalusin sciatica ama sciatica waxay kuxirantahay sida dhaqsaha badan ee aad ula qabsan karto sababaha calaamadaha. Tani waxay noqon kartaa, tusaale ahaan, muruqyada ciriiriga u ah kursiga iyo cudurka piriformis syndrome iyo / ama lafaha miskaha / u gudubka dhabarka hoose. Waxaan kugula talineynaa inaad tagto xarun caafimaad si aad u ogaato sababta aad ugu xanuunsato dareemayaasha xanaaqa / dareemeyaasha dareeraha.
Aaway dareemaha sciatica?
Dareemaha 'sciatica' waa dareemaha ugu dheereeya jirka. Waa dareemo aad u weyn oo qaro weyn oo runtii ah uruurinta fiiberka dareemayaasha dhaadheer. Wuxuu ku bilaabmayaa dhabarka hoose, wuxuu dhex maraa miskaha wuxuuna fadhiyaa xagga dambe ee bowdyaha iyo weylaha, wuxuuna ku dhammaadaa lugaha hortiisa. Jidadka, waxay siisaa qaabab badan oo kaladuwan oo leh dareemo dareemeyaal ah, oo ay ku jiraan muruqyada, muruqyada, xiidmaha, kala-goysyada, xididdada dhiigga iyo maqaarka.
PAGE xiga: 8 Tallaabooyinka Ka-Hortagga Dabiiciga Ee Ka Soo Horjeeda Rheumatism
Guji xiriirinta si aad ugu dhaqaaqdid bogga ku xiga.
Toueq et al (201)0). Faa'iidada spondylolisthesis ee dadka ku nool jimicsiyada. Tababar Xirfadlaha Caafimaadka. 2010, 158: 132-7. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20543413